Fitaovana, rindrambaiko ... Webware? | Martech Zone
Fitaovana, rindrambaiko… Webware?
Alarobia 16 Janoary 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ao amin'ny fivoaran'ny tontolon'ny solosaina dia nanana isika Hardware - ny fitaovana ilaina amin'ny fampandehanana ny fampiharana. Ary nanana izahay Software, ireo vahaolana nampiasa ireo loharanom-pahalalana ireo mba hanaovana ny asa azontsika vidiana sy apetraka amin'ny media samihafa. Amin'izao fotoana izao, azonao atao ny misintona ny rindrambaiko tsy misy haino aman-jery.
Fitaovana sy rindrambaiko roapolo taona
Ny hardware dia manana fanavaozana sy soloina. Very maina ny fanarahana ny solosaina rehetra ananako hatramin'izao. Manana ny sisa taolana tsy latsaky ny 5 miaraka amina laptop maty ao an-tranoko aho.
Ny rindrambaiko dia manana fametrahana sy fanavaozana izay mametraka fanovana eo amin'ny rindrambaiko. Rafitra fahagola izay mbola iasantsika sy iadivantsika ankehitriny. Nanana fanavaozana rindrambaiko aho androany androany izay nitaky ahy hanidy ary hamerina ny MacBookPro. Tsy mbola nisy fanavaozana OSX mbola ratsy mihitsy, fa isaky ny tsy afaka ny tsy hihazakazaka kely aho - mieritreritra fa ny ratsy indrindra no hitranga ary ho very ny asako rehetra. Manana mpamily tambajotra aho izay itahirizako ireo rindranasa alaiko ary mpamatotra CD izay itahirizako ny ambiny (ary hitako tsy hita foana izy ireo).
Ny lozisialy toa ny Google Spreadsheet, Google Analytics, Gmail, ExactTarget, ary taonina hafa dia mandeha amin'ny 'rindranasa miorina amin'ny tranonkala' na 'rindranasa miorina amin'ny tranokala' na koa mamoaka fanafohezana, SaaS. Fanafohezana mahatsiravina io ary manazava ny karazan'orinasa fa mihoatra ny karazana 'ware' izy io. Ary koa, ny fampiharana SaaS maro dia mbola manana fanavaozana na famoahana lehibe. Tsy mila fametrahana na famerenana indray izy ireo, saingy tsy misy mandritra ny fotoana maharitra.
Ny anarana mety indrindra amin'ny rindranasa ankehitriny dia mety ho Netware, saingy toa izany Novell manana izany marika izany. Mety mandeha ny webware, saingy toa izany C | Net dia mampiasa izany. Toa misy azo atao ny fitaovan'ny fitetezana - saingy vaninteny fanampiny.
Maninona raha Webware?
Ny fehiny dia ny Webware (Tsy nahamarika mari-pamantarana) no fivoaran'ny fampiharana antsika manaraka. Androany, tena tsy ilaina intsony ny fampiharana tsy hijanona intsony. Manana pejy an-jatony ao amin'ny fampiharana izahay any am-piasana ary afaka manodina pejy vaovao nefa tsy manala ireo taloha. Azoko antoka fa mety hisy fivoarana kely ary koa toerana ahafahan'ny mpampiasa tetezamita mitranga eo amin'ny fampiharana taloha sy vaovao.
Ny databata dia azo averina amin'ny fomba manidina, na misy latabatra vonjimaika vaovao azo atsangana handraisana ny tetezamita. Azo antoka, asa fanampiny io, saingy ny tiako holazaina dia hoe azo atao izany. Tsy mila manelingelina ny mpanjifantsika intsony izahay.
Tsy manana floppy miasa ao an-tranoko aho. Mahalana aho no mampiasa ny CD / DVD-ko. Ny zavatra ataoko dia mifototra amin'ny Internet izao. Rehefa misintona sy mametraka rindrambaiko aho dia mazàna mitahiry kopia ao amin'ny Buffalo Tech kapila tambajotra.
Na amin'ny orinasa aza, tsy ilaina izany. Rehefa nanomboka aho Indiana kely kokoa ho an'i Pat Coyle, tsy niaraka tamin'ny mpampiantrano izahay. Ny fampiharana dia natsangana ary nampiarahana Ning. Izahay dia manana ny toe-javatra rehetra atoro anao Google Apps izay ahafahantsika mampiasa mailaka ary koa Google Docs. Tsy misy fitaovana, tsy misy rindrambaiko… fa tranonkala.
Fa maninona no tsy antsointsika hoe Webware izany?
Tags: Hardwarerindrambaikorindrambaiko ho serivisyrindranasa tranonkalaweb appssehatra Internetsehatra an-tranonkalatranonkala
Maninona no tsy misy adihevitra mahery?
Janoary 16, 2008 amin'ny 11:38 PM
Anarana tsara izany.
Anaran-tranonkala efa noraisina
Hiala ve izany?
Tsy haiko fa mety
Jan 17, 2008 ao amin'ny 2: 52 AM
Tiako ity. Fa angaha moa tsy ataonareo tsinontsinona ny “middleware” izay hamaha ny olana rehetra tamin'ny taona XNUMX. Tiako ny tranonkala. Mahaliana fa tsy misy marika. Indrisy fa nalaina tahaka ny zavatra hafa rehetra ny URL.
Jan 17, 2008 ao amin'ny 10: 07 AM
Tena tiako ny fampiharana rehetra mifototra amin'ny Internet izay mitohy mipoitra ary ampidirina ao amin'ny kitapo fitaovako. Mampiasa Google Docs toy ny adala aho ary ho an'ny olona mampiasa solosaina 3-4 isan'andro ao anatin'ny iray andro dia famonjena aina izany.
Na izany aza, isaky ny manomboka mampiasa serivisy vaovao mifototra amin'ny tranonkala aho, dia misy foana io feo kely io ao ambadiky ny lohako mikorontana amin'ny fotoana iray. Izany hoe rehefa very ny connexion internet-ko aho dia very ny fidirana amin'ny Google Docs rehetra, ny angon-drakitra momba ny faktiora mpanjifa, ny mailaka, ny IM-ko, ny sariko tsy tambo isaina ao amin'ny Flickr, sns.
Mahatonga antsika hametraka bebe kokoa ny atodintsika ao anaty harona iray ity fiovàna mankany amin'ny rindrambaiko web ity. Avy eo dia mamatotra tady lava amin'io harona io isika ary atsipy eny amin'ny habakabaka. Raha mbola mifamatotra ny tady dia mamy ny zava-drehetra. Saingy rehefa levona io tady io dia mety ho tsy misy hery koa aho.
Heveriko fa ny tiako holazaina eto dia ny hoe mba hahafahan'ny Webware tena miala dia mila fidirana amin'ny Internet azo ianteherana, miparitaka ary mihoa-pampana. Ary ny fananana navigateur web amin'ny findainao dia tsy mitovy. Azoko antoka fa azoko atao ny mampifandray ny solosaina findaiko amin'ny findaiko verizon sy ny surf, fa raha mihoatra ny fetran'ny bandwidth aho na ny fetran'ny fampidinana ao anatin'ny iray volana dia voaroaka aho. Tsy mila adin-tsaina toy izany aho.
Janoary 17, 2008 amin'ny 5:04 PM
Mampihomehy tokony holazainao izany. Vao avy nilaza tamin'ny mpanjifa iray aho omaly fa ny ankamaroan'ny lozisialy tazahako dia tsy misy afa-tsy amin'ny Internet ho fampiharana amin'ny Internet. Efa fantatro izao ny fiantsoana an'io zavatra io… webware!
Jan 18, 2008 ao amin'ny 7: 29 AM
Efa elaela ihany aho no niteny an'io… Ny CMS/Online apps foana no resahiko ho toy ny webware… Gaga aho fa tsy maheno an'izany intsony izahay.
Jan 18, 2008 ao amin'ny 9: 39 AM
Toa tsara ny Webware. Tsy ho ela dia hifandona amin'ny vokatra ao amin'ny Internet ny orinasa lehibe rehetra amin'ny solosaina / IT. Izany no fironana ary mbola manomboka mitranga amin'ny fahatongavan'ny rindrambaiko mirona amin'ny tranonkala.